5 yeakanakisisa etsika WWE mabhande ezita - Wwe
5 yeakanakisisa etsika WWE mabhande ezita
WWE yakaburitsa mamwe mabhenji enhoroondo munhoroondo yayo, asi seyakanaka sezvakaita mamwe acho, tsika idzo dzinogara dzichiita kuti vanhu vataure uye vawedzere kufarira kweiye mukwikwidzi.
Muenzaniso uchangobva kuitika weizvi ungave apo Kalisto nguva pfupi yadarika paakaisa mufananidzo pa Instagram apo tambo yeCroiserweight Championship yaitaridzika nhema. Yakanga isiri, asi yakaita kuti vanhu vataure. Kunyangwe vateveri vewrestling vanovenga shanduko, vanoda bhandi idzva.
Mabhanti etsika akatonyanya kukosha nekuda kwekuti pakange pasina akawanda kubvira pakatanga WWE. Ivo vanounza kufarira uye vanotungamira kune yakawanda yekutengesa kutengesa sezvo vateveri vachishevedzera kuti vave nemufananidzo weasingawanzo dhizaini.
WWE yakatoisa mari pachinhu ichi neThe New Day tsika yeWWE Tag Team Makwikwi anowanikwa muWWE Shop, kunyangwe vasina kumboonekwa paterevhizheni.
Zvakanaka kuti uone zvakasiyana zvinotora mabhanhire emakwikwi. Ini ndiri shasha huru yemipendero yepadivi iyo iyo mikundano mikuru yava nayo sezvo shasha yega yega yawana yake yekutenderera pabhanhire.
Chinyorwa ichi chichatarisa mashanu emabhande etsika akanakisa akagadzirwa eWWE, kungave kuri kwepakati-kadhi zita kana rakakurumbira mukambani.
# 5 Goridhe yeGoridhe Intercontinental Championship Belt
Goldmember angade bhandi iri.
Goldust hunhu hunoshamisa kunyangwe nanhasi. Kunyangwe akave akaipisisa sei munguva yakapfuura, handikanganwe kushatirwa uye kushamisa kwaaive paakatanga kuita dambe muWWE. Kana paine chero chinhu, hunhu hwaive kumberi kwenguva pamwe nemaonero emagariro nezvechikadzi nekukweva vahosi zvichienzaniswa nemaitirwo azvino.
Aive akavakwa nemazvo uye akazopera nechaunga. Akanyepedzera neRazor Ramon uye akazopedzisira atora iyo Intercontinental Championship pa1996 Royal Rumble. Akabata zita iri kusvika muna 1996 Mambo weRin'i, aine nguva shomana payaive isina munhu nekuda kwekukwikwidza, asi yaive yekumhanya kwemwedzi mitanhatu nebhandi repakati-kadhi.
Yakanga iri panguva ino iyo Goldust yainyatsoita kuti bhanhire riitwe zvakare ala Ultimate Warrior mune rakanakisa goridhe ruvara. Chaizvoizvo chaitaridzika kunge chakakosha. Nehurombo, haina kugara kwenguva refu uye mifananidzo yacho isingawanzo. Kunze kwekunge iwe waive uchiona iyo programming panguva iyoyo, pamwe ungadai usina kana kuziva nezvayo.
Iye zvino waverenga iyi slide asi, hauzombokanganwa bhandi re… Goldust.
chii chekuudza shamwari yangu mushure mekurambana
mitsara inozivikanwa kubva kuna dr seuss mabhuku
kubvisa sei godo muhukama
anondida asi ini handimude